करोडमा ह्याट्रिक – Fursad Nepal
August 1, 2017	Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी 106 Views
जमान युट्युबको छ । कसैले फुइँ हाँक्नै पर्दैन । कुन गीतमा कति दम छ भन्ने युट्युबमा छर्लङ्गै हुन्छ, भ्युज अनि ट्रेन्डिङबाट । र, युट्युब भ्युजलाई मानक मान्दा नेपाली फिल्मी संगीतमा अघिल्लो लहरमा छन्, राजनराज सिवाकोटी । किनभने नेपाली फिल्मका जम्मा ६ गीतको भ्युज युट्युबमा एक करोड नाघेको छ, जसमध्ये तीनवटा त उनकै छ । वडा नम्बर ६ को ‘सुर्के थैली…’ बाट करोड भ्युजको खाता खोलेका यी सर्जकले छक्का–पञ्जाको ‘पूर्वपश्चिम रेल…’ हुँदै दुई रुपियाँको ‘कुटुमा कुटु…’ सम्म आइपुग्दा ‘ह्याटिक’ गरेका हुन् । अझ ‘सुर्के थैली…’ ले दुई करोड भ्युज बटुलेर युट्युबमा सर्वाधिक हेरिने गीतको रेकर्ड बनाएको छ । ३ करोड आवादी भएको मुलुकमा यतिबिघ्न भ्युज कमाउनु चानचुने कुरा हो र ? त्यस्तै, ‘पूर्वपश्चिम रेल…’ १ करोड ७० लाख र ‘कुटुमा कुटु…’ १ करोड २३ लाखपटक हेरिएको छ । यीबाहेक पर्वको ‘काले दाइ…’, लुट २ को ‘ठमेल बजार…’, हाउ फन्नीको ‘सिरैमा सिरबन्दी…’ को भ्युज पनि युट्युबमा करोड पार गरेको छ । यो लोभलाग्दो सफलताको कारण के होला त ? राजनराज फ्याट्टै भन्छन्,
‘माटोको सुगन्धसँग मेल खाने शब्द संरचना र मेलोडी । अनि मौलिक बाजाको प्रयोग र एरेन्जमेन्ट ।’ हुन पनि उनका गीतहरूमा प्रयुक्त शब्दहरू बनावटी हुन्नन्, वास्तविकताको समीपमा हुन्छन् । सोही कारण दर्शक/श्रोताले ‘रिलेट’ गर्छन् । यस्ता गीतका ‘सेन्टिमेन्ट’ ले छिट्टै छुन्छ पनि । जस्तो, ‘सुर्के थैली…’ मा उनले मदानी, झुम्के, ठेका, बहीखाताजस्ता शब्दहरूको सुन्दर संयोजन गरेका छन् । शब्द, संगीत र गायनमा तीनै बिटमा नाम कहलिएका राजनराज भन्छन्, ‘यी शब्दहरू नयाँ पुस्ताका लागि चाखलाग्दो भए, पुरानो पुस्ताहरू फ्याल्सब्याकमा गएँ । त्यसैले हरेक उमेर समूहमा प्रिय भयो ।’उनका गीतहरू सार्वजनिक यातायात, विवाह भोजभतेरजस्ता उत्सवदेखि स्कुल/कलेजका वार्षिक कार्यक्रमहरू जताततै घन्कन्छन् । त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको चाहिं, फिल्म प्रचारप्रसारको पहिलो अस्त्र भइदिन्छ गीत । हिजो वडा नम्बर ६ र छक्का–पञ्जाले त्यसको फाइदा उठाइसके भने रिलिजअगावै दुई रुपियाँलाई प्रतीक्षित सूचीमा राखिदिएको छ ‘कुटुमा कुटु…’ ले । यस्तै दाउ हान्न खोज्दै छन्, पिँजडा ब्याक अगेन, ह्याप्पी डेज, कमलीको बिहे आदि–आदि । यी फिल्ममा पनि उनको परिचित शैलीको गीतहरू समावेश छन् ।
राजनराज किन पनि फिल्मकर्मी र आममान्छेसँग प्रिय भइरहेका छन् भने हाम्रो मौलिक लोकभाकालाई बडो प्रेमील शैलीमा फिल्मी गीतमा ढालिदिए, जति बेला क्षणिक चर्चा कमाउने र आयातित गीतहरूको बाहुल्य हुँदै थियो । राजनराज यो भीडमा मिसिएनन्, उनले हाम्रै अग्र्यानिक संगीतको सहारा लिए, प्रश्रय दिए । त्यसो त उनीभन्दा अगाडि लोकलयले फिल्ममा ‘इन्ट्री’ नै नपाएको भने होइन । ‘चट्टरुमाल…’, ‘आज बाह्रहाते पटुकी…’, ‘गैरी खेतको शिरै हान्यो…’, ‘मोहनी लाग्ला है…’ जस्ता लोकलयमा आधारित गीतहरू काफी लोकप्रिय भएका थिए फिल्ममा । यी गीत सदावहार प्रिय मानिन्छन्, आज पनि सुनिन्छ ।तर बीचमा लोकभाका एकाध मात्र फिल्ममा समेटिए, तीनले पनि अपेक्षाकृत चर्चा पाउन सकेनन् । राजनराजले त्यही खाडल पुरिदिए । भन्छन्, ‘लोकलयलाई फिल्ममा हिट गराउन अरू सर्जकले पनि मिहिनेत नगरेका होइनन् । तर मेरा गीत अलि बढी क्लिक भयो ।’ यद्यपि उनी ‘सुर्के थैली…’ बनाउनुअगाडि धेरै समय नरन्थिनिएको भने होइन । पुराना शब्द, बाजा, गीतले सिर्जने माहोल नयाँ पुस्ताले नस्विकार्लान् कि भन्ने भय थियो । तर मौलिकता कसलाई प्रिय नलाग्ला ? एकपछि अर्को गीतको लोकप्रियताले यसको जवाफ दिइसकेको छ । तीनवटा गीतले सफलताको शिखर चुमेपछि राजनराजले गुनासो (आरोप ?) सुन्नुपरिरहेको छ, एउटै शैलीका गीत भयो भन्ने आशयका । तीनै गीत झट्ट सुन्दा भाका उस्तै–उस्तै हो कि भन्ने भान हुन्छ पनि । तर यसलाई ठाडै नर्काछन् उनी किनभने उनकै शब्दमा, तीन गीतमा व्यापाक अन्तर छ । जस्तो, ‘सुर्के थैली…’ मा बिर्सिएका शब्दलाई ब्युँताए भने ‘पूर्वपश्चिम रेल…’ मा देशको विकासको अवधारणा राखे, रेल आइदियोस् भन्ने आशासहित । अनि ‘कुटुमा कुटु…’ चाहिं जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, यसमा धुम्रपान–मद्यमान गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । समाजका अनेक पक्षमा चासो राख्ने यी संगीतकार भन्छन्, ‘गीतको भाव र विचार अलग भयो भने यस्ता अरू धेरै गीत पनि दर्शकलाई वाक्क लाग्दैन । फेरि मेरा गीतको कम्पोजिसन पनि भिन्न हुन्छ ।’ त्यसैले त उनले आगामी सिर्जनामा पनि यही ‘लिगेसी’ लाई निरन्तरता दिंदै छन् । ‘कुटुमा कुटु…’ गीतको युट्युब भ्युजबाट मात्र १२ लाख रुपियाँ कमाइ भएको बताइन्छ । अर्थात् फिल्मको कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा ज्यादा । यति रकम कमाउन भोलि फिल्म रिलिज भएपछि घटीमा ३५ लाख व्यापार गर्नुपर्छ । अर्कातिर यो गीतले फिल्मको पर्याप्त ‘ब्रान्डिङ’ गर्‍यो, प्रचारप्रसारको खर्च पनि जोगायो । यसरी बहुआयामिक फाइदा दिलाउने गीतका लागि राजनराज कति पारिश्रमिक लिन्छन् ? चासो हुने भइहाल्यो । यो प्रश्न सोध्दा उनी फिस्स हाँस्छन् अनि बडो तौलिएर बोल्छन्, ‘जे होस्, मलाई चित्तबुझ्दो लिइरहेको हुन्छु ।’ चित्तबुझ्दो भनेको चाहिं कति ? उनी मुस्कुराए मात्र । हाक्काहाक्की नभने पनि उनीसँग काम गरेकाहरूचाहिं प्रतिगीत डेढ लाखको हाराहारीमा लिने गरेको बताउँछन् । अझ पछिल्लो समय त उनी युट्युबमा ४० लाख भ्युज कटेपछि युट्युबले उपलब्ध गराउने पैसामध्ये ३० प्रतिशत आफूले पाउने दाबी गर्न थालेका छन् । तर उनको यो निर्णयले भने कतिपय फिल्म निर्माता चिढिएका छन् किनभने निर्माताले डिजिटल राइट्स ढिक्कै अरूलाई बेचिसकेका हुन्छन्, जसमा गीत, ट्ेरलरदेखि पूरा फिल्मसमेत पर्छ । त्यसैले राजनराजको सर्त पूरा गर्न प्राविधिक कठिनाइ आइपर्छ । बरु उनले सुरुमै चाहेजति पारिश्रमिक डिमान्ड गर्दा दुवै पक्षका लागि किफायती हुने निर्माताहरू बताउँछन् ।
karod club nepali movie songs rajan raj siwakoti	2017-08-01
Tags karod club nepali movie songs rajan raj siwakoti
Previous कात्तिक १७ मा सौगात र बेनिशाको ‘झ्यानाकुटी’
Next ‘जता जता पिरतीको बाटो…’मा दी कार्टुन क्रुज